Ntugharị na Nduzi United States Otu Di na Nwunye
Mba United States bụ mba dị ukwuu, dịgasị iche iche. N'okwu dị iche iche nke dị iche iche, ọ dịghị mba ọzọ na-abịa nso. Site n'ugwu na ebe a na-eme njem ntụrụndụ na ebe ndị dị oké osimiri na ala akọrọ, ebe okpomọkụ, America dị n'ọtụtụ ụzọ microcosm nke Ụwa n'onwe ya. O yiri ka a na-anọchite anya ihe ọ bụla nke okike, gụnyere omenala.
Ulo na-ekpo ọkụ site ná mmalite, America abawo uru site na ọtụtụ narị afọ nke nchịkọta nke ụwa ndị ọzọ, ndị na-achọ mmalite ọhụrụ na mmalite ọhụrụ, ndị bịarutere na omenala na ntụziaka ha kacha mma na ịkwanye. Ị nwere ike ịhụ ma detụ ya niile n'ebe a - site na nnukwu ọkụ ọkụ obodo nke New York na ala-n'ụlọ na-eche nke obi - America bụ ebe a ga-ahụmahụ.
Mba United States bụ mba buru ibu, nke atọ ma Russia ma Canada na oke nchịkọta ụwa n'ụwa. N'akụkụ a sara mbara, ala dịgasị iche iche bụ obodo na akara ngosi nke na-emeju onye ọ bụla njem - n'agbanyeghị ihe mmasị gị bụ.
Site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri, site na ịma mma nke Maine nke dị na desert desert nke Southwest, America nwere ya nile.
New York - Otu n'ime obodo kachasị nleta na-eleta ụwa kwa afọ, New York bụ mecca nke nri nri, akụ na ụba, ọdịbendị na omume ndụ abalị. Site na ocha nke Greenwich Village na oke ọnụnọ nke Midtown, New York na-eguzo n'elu ihe ndepụta onye ọ bụla nke America maka ihe kpatara ya.
Miami - N'ọtụtụ ụzọ, Miami bụ New York nke South. Ọnụ ụzọ ámá South America, Miami na-ekpo ọkụ, sultry, sexy na ọhịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịlụ ọgụ siri ike ma bie ndụ dị ka onye amaala, Miami bụ ebe ị ga-aga.
Chicago - Ị ga-abata maka pizza ma nọrọ maka ọmarịcha ogbe ndịda, akụkọ ihe mere eme na omenala obodo Chicago na-enweghị atụ. Otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'America mbụ, Chicago bụ nnukwu obodo ukwu nke na-anọdụ ala na Americanlandland - ị ga-enwekwa obi ụtọ.
Denver - Iwu ọhụrụ a na-ese wii wii, Denver dị ezigbo mma ma dị egwu. A oyi wonderland ebe ị nwere ike ịkwa ụtụtụ na-egwu gọlfụ n'ehihie, Denver bụ obodo jupụtara nri dị ukwuu, ụlọ oriri ọhụrụ hip, biya nkà na, ee, igbo iwu. Echefula igwefoto gị, Otú ọ dị, dị ka echiche dị na gburugburu Denver jikọtara ihe ọ bụla ị ga-ahụ n'obodo ọ bụla dị n'ụwa.
Seattle - Ikekwe obodo ọ bụla dị ka Seattle, nke na-anọdụ n'akụkụ ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke mba ahụ, ọ na-abụkarị na mmiri na-ezo na mmiri ozuzo mgbe niile, ma ọ bụ na ọ dịghị onye na-echegbu onwe ya. Seattle mara mma, dị ọcha na n'ihu-iche echiche. Nnukwu biya, ụfọdụ n'ime ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị na-abịanụ na America na ọhụụ dị egwu na-echere gị.
Boston - Ndị America nwere ike ịchọrọ na Boston dịka Dublin nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ, nke dị mma ka a mara ya dị ka onye na-aṅụ oké mmanya, nwa nwanne 1st nke isi obodo Irish. N'ịbụ onye nwere onye kasị elu nke ụmụ amaala Irish na United States, Boston na-agbakwunye ihe nketa Katọlik ya na Irish na nnukwu Guinness, ndị amaala Irish (mere nri) na ọtụtụ ihe ndị na-akpali mmasị n'akụkọ ihe mere eme.
San Francisco - Obodo nke na-aga ije n'egwurugwu nke mmiri ya, San Francisco emechaala okwu ahụ gbanyụọ. E wezụga ịbụ obodo nke hippest ebe ọ bụ na etiti 1960 na-eme njem omenala, San Francisco nọgidere na-etinye ego ma na-emeziwanye onwe ya n'ime ọtụtụ iri afọ site na nchọpụta nke mmepụta nri na otu n'ime ebe ndị kasị mara mma na United States.
Nashville - Obodo Music bụ otu n'ime obodo ndị kasị ọsọ na nke a na-eleta na America. Site na nkwughari nke akụkụ nke ime obodo na agbata obi, Nashville bụ ugbu a maka ịkụ egwú, nri na nnukwu ntụrụndụ. Agụụ na-agụ gị na-ahapụ gị.
Austin - Dị ka Nashville, Austin na-anọ n'akụkụ egwu egwu, ndị mmadụ na nnukwu nri. Ndị obodo Austin nọ na-enweta ma na-ekpo ọkụ, ha ga-egosikwa gị gburugburu na nnukwu ụlọ ọrụ BBQ ọ bụla n'obodo ahụ, mgbe niile ka ị na-atụgharị gị na ndị ọrụ biya. Ọ bụ n'ezie fun obodo - ìhè-obi, mma na-adọrọ mmasị.
Las Vegas - A na-akpọ ya Sin City maka otu ihe. Enweghị ebe ọ bụla ma Vegas ị nwere ike imeri uba ma hapụ ya n'otu ụbọchị - ka naanị gị lụọ! Las Vegas bụ anụmanụ nke ya, ịbụ obodo ịgba chaa chaa nke America nke na-anọdụ dị ka ohia n'etiti etiti Southwest. Mgba ọkụ na-egbuke egbuke, ụda, ihe ngosi na ntụrụndụ - Vegas bụ ihe ị nwere ike ime otu ugboro, mana gị nwere ime otu ugboro.
Yellowstone National Park - Ụlọ nke "Old Faithful", Yellowstone bụ otu n'ime ebe kachasị mma na ebe kachasị mma na United States. Ogige ahụ na-agafe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 3,500, gụnyere ọdọ mmiri, canyons, osimiri na ugwu.
Ukwu kaniyon - Nnukwu ihe omimi na ihe mara mma, nnukwu kaniyon bụ ebe ịtụnanya zuru oke nke a ghaghị ịhụ.
Niagara Falls - Ighachite na ókèala US / Canada na New York State, Niagara bụ ebe obibi dị ala na-eweda ala iji nweta. N'ihe karịrị 3,100 tọn mmiri na-asọfe ọnụ ugwu niile nke abụọ.
Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe - Nwanyị nnwere onwe na-anabata ndị ọbịa si n'ebe ọwụwa anyanwụ ka ha na-efega New York ọtụtụ ụzọ ha si kelee ndị si mba ọzọ na Ellis Island karịa 100 afọ gara aga. Ọ na-anọgide na akara ngosi American.
Ugwu Rocky - Site na New Mexico ruo na Kanada, "Oké Nkume" ahụ so n'ime ụfọdụ ugwu ndị kachasị emetụta ụwa ma bụrụ ihe dị mkpa maka ọdịdị-ndị hụrụ ya n'anya, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na ndị na-ese foto.
Washington, DC - Capsule oge ya, DC bụ isi obodo na ụlọ ọ bụghị naanị ụlọ isi obodo, ma White House, Pentagon na onye gburu ihe ngosi nka mara mma nke akụkọ ntolite akụkọ America.
Upper Peninsula nke Michigan - Michigan na - ekewa n'ime ebe abụọ - nke dị n'ebe ndịda na Upper Peninsula, nke e nyere ha na nkwekọrịta na narị afọ 19th na steeti Ohio. "UP", dị ka a na-akpọ ya, bụ ebe dị mma maka ọdịdị, mmiri mmiri, anụ ọhịa na ụdị ọrụ ọ bụla dị ka kayaking na golf.
Ogba Ochie nke West West - Ngwurugwu Gold Rush na-adọrọ mmasị nke malitere na narị afọ nke 19th mere ka ndị mmadụ bi n'ebe ọdịda anyanwụ malite, na-emepe ogige ndị na-egwupụta egwu ndị kwere nkwa n'ọdịnihu ụwa ka ha ghara ịdaba. N'elu ha, ihe karịrị 150 afọ ole na ole, e nwere ọtụtụ "obodo ndị mmụọ" n'ime obi America na Old West dịka Tombstone na Deadwood na aghaghị ịhụ.
Osisi Redwood nke Northern California - Ihe ngosi nke vistas, Redwoods na Northern California bụ ihe dị mkpa maka ndị hụrụ ọdịdị. Nke kachasị mma bụ Muir Woods, aha ya bụ John Muir, onye nchọpụta 19th nke narị afọ nke narị afọ, na saịtị nke crescendo na fim nke James Stewart, vertigo.
Lake Tahoe - Naanị obere ụgbọala site na Muir Woods, Lake Tahoe bụ ebe mara mma nke ọma na mbara igwe oyi na oge egwuregwu. Hụ na ị ga-ahụ "ụlọ tii", obere obere ụlọ na-anọ na Fannette Island n'etiti Emerald Bay. Ịga ụlọ tii na-enye ihe mgbagwoju anya, ma na-ewere 360 ogo akara ngosi.
United States dị iche na ịmepụta njem site na mba ndị ọzọ, ọ bụ n'ihi na ọ hà. Ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ịgụnye ụfọdụ obodo dị iche iche na njem obodo n'ihi na ha ejikọta na obodo ndị ọzọ na mpaghara, anyị gụnyere gụnyere ka o kwere omume.
Anyị nwere ihe ole na ole e depụtara n'okpuru ebe a bụ ndị na-adọrọ mmasị na nsobe obodo na ihe anyị na-akwado ịhụ. Ị ga-ahụ ọkwa dị iche iche ise, na-efe efe n'ime isi ise US - New York City, Atlanta, Miami, Denver, na Los Angeles. A na-ahazi usoro ihe omume ndị a na ihe mgbaru ọsọ nke ịchekwa ego site na njem site na ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala na ịzụta ụgbọ elu ndị ọzọ.
Nhọrọ 1: Ụzọ ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ:
Ụbọchị 3: New York City
Ụbọchị 5, tinye: Boston
Ụbọchị 8, tinye: New York (Ebe Adirondack / Niagara Falls).
Ụbọchị 10, tinye: Filadelfia
Ụbọchị 12, tinye: Washington, DC
Ọzọ: Ọ bụrụ na ị na-anọ izu abụọ ma ọ bụ karịa, gbasaa na njem Southern, dị n'okpuru ebe a. Jiri Raleigh, North Carolina dị ka isi n'etiti Washington, DC, na Atlanta. Ị nwere ike dochie Raleigh na njem ndị dị n'okpuru ebe ị na-etinye oge na ụsọ oké osimiri Carolina na Charleston.
Nhọrọ 2: Ntugharị Southern
Ụbọchị 3: Atlanta
Ụbọchị 5, tinye: Nashville
Ụbọchị 8, tinye: Raleigh
Ụbọchị 10, tinye: Charleston
Ụbọchị 12, tinye: Savannah
Ọzọ: Ọ bụrụ na ịnọ izu abụọ ma ọ bụ karịa, gbasaa na njem Florida, dị n'okpuru ebe a. Jiri Jacksonville, Florida dị n'etiti Savannah na Miami. Dochie njem njem Jacksonville na Florida site n'ịnọgide na Orlando / Tampa.
Nhọrọ 3: njem njem Florida
Ụbọchị 3: Miami
Ụbọchị 5, tinye: Fort Lauderdale
Ụbọchị 8, tinye: Orlando & Disney / Tampa
Ụbọchị 10, tinye: Jacksonville
Ụbọchị 12, tinye: Panama City / Panhandle
Nhọrọ 4: Ịgagharị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ
Ụbọchị 3-4: Los Angeles (tụlee ndọtị n'ime San Diego)
Ụbọchị 6, tinye: San Francisco
Ụbọchị 8, tinye: Lake Tahoe
Ụbọchị 10, tinye: Portland
12 - 14 ụbọchị, tinye: Seattle
Ọzọ: Ọ bụrụ na ị na-anọ izu abụọ ma ọ bụ karịa, gbasaa n'ime Ụzọ Nlegharị Kasị, nke dị n'okpuru. Jiri Jacksonville, Florida dị n'etiti Savannah na Miami. Dochie njem njem Jacksonville na Florida site n'ịnọgide na Orlando / Tampa.
Nhọrọ 5: Ntughari Okirikiri
Ụbọchị 3: Denver (tụlee ndọtị n'ime Vail ma ọ bụ Breckenridge)
Ụbọchị 6, tinye: South Dakota (Ugwu Rushmore na Deadwood)
Ụbọchị 8, tinye: Yellowstone National Park
Ụbọchị 10, tinye: Salt Lake City
Ụbọchị 14, tinye: Las Vegas na Ukwu kaniyon
Ụbọchị 17, tinye: Phoenix na San Diego
asụsụ: Bekee. N'ihi mba dị iche iche nke America na Europe na Eshia, a na-asụ Bekee na pasent ole na ole nke ndị bi na ya nwere ikike ime ihe. Ndị na-asụ asụsụ nke abụọ na-emekarị ya n'ihi na ọ bụ ihe nketa ha dịka onye bi na United States
N'akụkụ dị omimi nke Texas na Florida, a na-asụ Spanish (Otú ọ dị, asụsụ abụọ dị iche iche na-asụwa na Spanish Spanish na South America Spanish) nakwa n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke French na German.
Ego: Dollar United States (USD). The USD megide Euro bụ ugbu a 1 USD ka 0.92 EUR.
Ike Ike: Na United States nke America, ogwe aka dị iche iche bụ ụdị A na B. Ụdị voltage ọkọlọtọ bụ 120 V na akara ngosi bụ 60 Hz.
Gụkwuo banyere United States
By Justin & Tracy | July 12, 2019 | Comments Off na Shrimp Fra Diavolo
By Justin & Tracy | July 5, 2019 | Comments Off na Chicken Tetrazzini
Chicken Tetrazzini bụ efere ndị American, nke e kwuru na e kere na Ụlọ nkwari akụ nke dị na San Francisco, ebe ọ bụ Luisa Tetrazzini bụ onye bi na Italian oge ọ bụ onye bi na ya. Ọ bụ ihe a ma ama na narị afọ nke 20th dị ka nri ezinụlọ obi ụtọ nke a pụrụ ime n'ụlọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbagwoju anya, ọ gụnyere ihe ole na ole na-emepụta - gụnyere ihe kariri iri na abụọ. E nwere ... GỤKWUO